Amiirkii labaad ee Daacish oo lagu dilay duqeyn ka dhacday Ciraaq – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Amiirkii labaad ee Daacish oo lagu dilay duqeyn ka dhacday Ciraaq
Waxaa maanta wasaaradda gaashaandhiga Ciraaq shaacisay in ciidamada Ciraaq iyo kuwa Isbaheysiga ee gacanta siinaya ay dileen ninka labaad ugu sarreeya hogaanka Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Shaam oo sidoo kale loo yaqaano Daacish ama ISIS.
Amiirka la dilay waxaa lagu magacaabaa Abdul Rahman Mustafa Mohammed, oo ku magac dheeraa “Abu Alaa al-Afri”, sidaas waxaa xaqiijiyey Brig-Gen Tahsin Ibrahim oo ah afhayeen u hadlay wasaraadda difaaca Ciraaq.
Gen Tahsin Ibrahim ayaa sheegay in sarkaalkaas sare ee ka tirsan hogaanka Daacish lagu dilay duqeyn xagga cirka, ayna la dhinteen dhowr ka mid ah dagaallayahanada Daacish.
Sarkaalkaan ayaa sidoo kale sheegay in weerarka lagu dilay qaaddi sare oo ka tirsan Daacish, kaasoo lagu maghacaabi jiray Akram Qarbash.
Isbaheysiga weerrada cirka ah ku haya Daacish ayaa sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ay 15 duqeyn oo xagga cirka ku qaadeen meelo ku dhow magaalooyin Muusil, Faluuja, Sinjaar, Talcafar, Biiji iyo Qaa’im.
Todobaadkii lasoo dhaafay wasaaradda arrimaha debadda Mareykanka ayaa sheegay in $7 Milyan dollar la siin doon ciddii keenta macluumaad ku saabsan Abdul Rahman Mustafa al-Qaduli oo sahla in la dilo ama la soo qabto.
Khalaafada Islaamiga ah ama Daacish weli wax jawaab ah kama bixin warka kasoo yeeray wasaaradda difaaca Ciraaq.
DEG-DEG: Jenaraal sheegay inuu afgembiyey madaxweynaha Burundi